D.Federaalka oo gacanta ku dhigtay qalabka Saadaasha Hawada oo Nairobi loo waday iyo Khilaaf cusub. | Mustaqbal Radio
Home - Wararka Somalia - D.Federaalka oo gacanta ku dhigtay qalabka Saadaasha Hawada oo Nairobi loo waday iyo Khilaaf cusub.
D.Federaalka oo gacanta ku dhigtay qalabka Saadaasha Hawada oo Nairobi loo waday iyo Khilaaf cusub.
May 16, 2017	40 Views
Muqdisho: Khilaaf cusub ayaa soo kala dhexgalay Hay’adda Maamusha Hawada Soomaaliya ee ICAO iyo Dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya.
Hay’addan oo fadhigeedu yahay Nairobi,ayaa waxaa aay mar hore diidday in ay Dowladda Federaalka ah ku wareejiso Hawadeeda,waxaana hadda soo baxaya khilaaf cusub oo ka dhashay Qalabka maamulka Hawada oo loo waday Nairobi si khalad ahna ku soo gaaray Dekadda Muqdisho.
Saddex Kunteenar oo ay lahayd Hay’adda ICAO oo loo waday Xafiiskeeda Nairobi ayaa si kama ah ugu soo xirtay Muqdisho waxaana gacanta ku dhigay Dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya.
Madaxda Hay’adda ICAO ayaa Dowladda Federaalka ah ka dalbaday in ay Qalabkaas u soo gudbiso Nairobi waxaana taas ka biyay diidday Dowladda Federaalka ah.
Dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya waxaa ay dhameystirtay dhismaha Xarunta Maamulka iyo Koontaroolka Hawada Soomaaliya taas oo hadda aanay cidi ku shaqeyn.
Dhismaha Xarunta Maamulka Hawada Soomaaliya,Muqdisho
Qalabkan waxaa uu ku filanyahay maamulidda Hawada Soomaaliya,waxaana ay dowladda Federaalka ah dhowr jeer ooh ore codsatay in lagu wareejiyo Hawadeeda oo tan iyo bur burkii laga maamulayay Nairobi.
Dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya waxaa ay horay walaac uga muujisay qaabka ay Canshuurta Hawada Soomaaliya u ururiso Hay’adda ICAO ee gacanta ku heysa Hawada Soomaaliya.
Sida ay sheegayaan Warar hoose,Saraakiisha ugu sarreysa Hay’adda ICAO waxaa ay doonayaan in maamulka Hawada Soomaaliya oo ay si KMG ah u hayaan ay si rasmi ah ula wareegaan iyaga oo aan wax talo gelin iyo ixtiraam ah ka siineyn Dowladda Federaalka ee Soomaaliya.
Dowladda Federaalka iyo Hay’adda ICAO ayaa horay ugu heshiiyay in Hay’addu dib u dhis ku sameyso Xarunta Maamulka Hawad Soomaaliya ee Muqdisho,waxaana taas beddelkeeda y dayactir iyo qalabeyn ku sameysay ICAO Xafiiskeeda Nairobi.
Saddexda Kunteennar ee sida kama’a ah ugu soo xirtay Dekadda Muqdisho ayaa wada qalab ku filan Maamulka Hawada Soomaaliya waana sababta ay dowladda Federaalka ah u diidday in ay wareejiso.